သတင်း - NINTENDO SWITCH/LITE ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
၎င်းသည် နိုးထသည့်လုပ်ဆောင်ချက်၊ နားကြပ်ပေါက်၊ AUTO-FIRE TURBO၊ လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှု၊ ချိန်ညှိနိုင်သော တုန်ခါမှုစသည်ဖြင့်၊ ချယ်ရီပန်းရောင်ပါရှိသော MYTRIX ကြိုးမဲ့ PRO ထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြစ်သည်။
1. [ကြိုးမဲ့ခလုတ်နှင့် နားကြပ်ပေါက်နှင့် ကျောင်းလက်ဆောင်] ပန်းရောင်ခလုတ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် Nintendo switch နှင့် lite switch consoles များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး Super Mario Odyssey၊ The Legend of Zelda၊ Splatoon၊ Breath of The Wild စသည်တို့ကို ကြိုးတပ်နားကြပ်ဖြင့် တွဲချိတ်လိုက်သောအခါတွင် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ဂိမ်းအသံကို ရရှိနိုင်ပြီး သင့်အသင်းဖော်များနှင့် နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ဒါကလည်း သူငယ်ချင်း၊ ကလေးတွေအတွက် ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်လက်ဆောင်ကောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
2. [Auto & Manual Turbo Function & Wake Up] ဤ switch pro လက်ကိုင်သည် AUTO နှင့် manual turbo လည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ဂီယာ ၃ ချက် တာဘိုအမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိနိုင်သောကြောင့် ဂိမ်းတွင် ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသော တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။လက်မောင်းနှင့် ရော့ကာသည် လက်၏အရွယ်အစားနှင့် အံကိုက်ဖြစ်ပြီး လက်ချောင်းများ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို လျှော့ချကာ လမ်းချော်မှု ဆန့်ကျင်ကာ ပွတ်တိုက်မှုနည်းသော အသေးစိတ်အချက်များ သည် သက်တောင့်သက်သာရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေးစွမ်းသည်။ကွန်ဆိုးလ်ကို အိပ်မုဒ်မှ နှိုးလိုက်ရုံဖြင့် စခရင်ကိုဖွင့်ပြီး ပြင်ရန် ထိန်းချုပ်ကိရိယာပေါ်ရှိ ပင်မခလုတ်ကို အတိုလေးနှိပ်ပါ။
3. [ချိန်ညှိနိုင်သော တုန်ခါမှု3အဆင့်] တပ်ဆင်ထားသော မော်တာနှစ်ခု၊ ချိန်ညှိနိုင်သော တုန်ခါမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု3အဆင့်- အားနည်းမှု၊ အလတ်စားနှင့် အားကောင်းမှု၊ ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ပေးသည်၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ပြောင်းခြင်းဖြင့် ဂိမ်းအတွင်း တိုက်ပွဲမြင်ကွင်းကို ပိုမိုလက်တွေ့ကျကျ ခံစားနိုင်စေပါသည်။
4. [ရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့် အံဝင်ခွင်ကျ ဒီဇိုင်း] switch pro လက်ကိုင်သည် တည်နေရာ၊ အမြန်နှုန်းနှင့် လည်ပတ်မှုကို အလွန်တိကျစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး လျင်မြန်စွာ စတင်/ရပ်တန့်နိုင်သည့် 6-ဝင်ရိုးအာရုံခံကိရိယာ gyroscope ကို အသုံးပြုထားသည်။PINK ချယ်ရီပန်းပွင့်များ၊ ကွေးညွှတ်ချုပ်ကိုင်မှု၊ အဝိုက်ကြောနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ခလုတ်အပြင်အဆင် ဒီဇိုင်းပေါင်းစပ်မှုက သင့်လုပ်ငန်းကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေကြောင်း သေချာစေသည်။
6.[ဂိမ်းကြာမြင့်ချိန်နှင့် 1 နှစ်အာမခံ] Built-in 600mAh အားပြန်သွင်းနိုင်သောကြိုးမဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်ကိုင် Nintendo Switch၊ ဂိမ်းချိန် 15-18 နာရီကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ 2-3 နာရီကြာ အားအပြည့်သွင်းပြီးနောက် ဂိမ်းအချိန်ကို 15-18 နာရီ၊ USB ကြိုး ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ဂိမ်းအချိန်သည် အမြဲမရှိတော့ပါ။ ဘက်ထရီအားနည်းစေရန်နှင့် ပြတ်တောက်သွားသည်။ပက်ကေ့ဂျ်ရှိ ညွှန်ကြားချက်များကို သေချာဖတ်ပါ။ထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကျေနပ်လောက်သောရောင်းချမှုအပြီးတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါမည်။